२१औँ शताब्दिको सुहाउँदो शिक्षाका लागि कान्तिपुर एकेडेमीः प्रिन्सिपल गुरुङ (भिडियो) | KTM Khabar
२१औँ शताब्दिको सुहाउँदो शिक्षाका लागि कान्तिपुर एकेडेमीः प्रिन्सिपल गुरुङ (भिडियो)
२०७३ चैत्र १६ गते १८:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती भएसंगै विद्यालयहरुले विद्यार्थी लक्षित गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी हुने गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुगेरहेका हुन्छन् भने विद्यार्थीहरु पनि कुन स्कुल पढ्ने ?, कसरी स्कुल छान्ने ? भन्ने विषयको जानकारी लिन चाहन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले बौद्ध पिपलबोटमा रहेको कान्तिपुर एकेडेमी हाई स्कुलका फाउण्डर/प्रिन्सिपल बाल कुमार गुरुङसंग विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुँदै छ, स्कुलको गतिविधिमा कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
वास्तबमा यत्ति बेला व्यस्तताको नै समय हो किनभने हाम्रो शैक्षिक सत्र २०७३ सम्पन्न हुन लागेको छ । अब यहि महिना भित्र सबै खालका जुन कक्षा १० को एस. ई. इ. भईरहेको छ । कक्षा ८ को परिक्षा हुँदै छ । त्यस्तै अन्य भाई बहिनाहरुको परिक्षा पनि हुँदै छ । यो शैक्षिक सत्रको समापन गर्नु पर्ने बेला पनि भएको छ । योसंगै बैशाख देखि नयाँ शैक्षिक सत्र २०७४ को पुर्वसन्ध्यामा हामीले भौतिक, एकेडेमीक तथा विभिन्न तयारी गर्नु पर्ने भएकाले यो विद्यालयहरुका लागि व्यस्त समय पनि हो । यसमा हामी पनि व्यस्त नै छौँ ।
कान्तिपुरको हकमा २०७३ सालको शैक्षिक सत्र कस्तो रह्यो ?, के महशुस गरिरहनु भएको छ ?
शैैक्षिक सत्र २०७३ हरेका दृष्टिकोणले उपलब्धि मुलक, अत्यन्त राम्रो रहेको मैले अनुभव गरेको छु । यो शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा कार्यक्रमहरु बनाएका थियौ जुन उद्देश्यहरु बोकेका थियौ । त्यो उद्देश्यहरु राम्र्रोसंग प्राप्त हुन सकेको छ । विशेष गरी यो शैक्षिक सत्रमा हाम्रो एकेडेमीक क्रियाकलाप देखि जुन इसिय र सिसियका गतिविधिहरु थियो त्यो सफलताका साथ सम्पन्न भएको मैले अनुभुत गरेको छु । विशेष गरी हामीले सुरुवातको अवस्थामा एकेडेमीक कार्यक्रमहरु हामीले तय गरेका थियौँ । लगभग समयमा नै एकेडेमीक कार्यक्रमहरु, कोर्षहरु सम्पन्न हुने, त्यसलाई रिभिजन गर्ने जुन हामीले समय तोकेका थियौँ । त्यो भईरहेको छ र हामी चाहीँ विद्यार्थीहरुलाई अन्तिम परिक्षामा सहभागि गराउँने तयारीमा छौँ ।
त्यस्तै गरी यो बर्षलाई समिक्षा गर्नु पर्दा हामीलाई त्यस्तो खालको वाधा अड्चनहरु कहि कतैबाट आएन । अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरु सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौ । विशेष उपलब्धिका कुरा यो सालमा करातेको २ वटा अन्तराष्ट्रिय म्याचमा २ जना विद्यार्थीहरु सहभागि हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा सार्क कराते च्याम्पेन्सिङ्ग इन्डियामा भएको थियो । त्यसमा हाम्रो कक्षा १० पढ्ने सन्दिप राना मगरले सिल्भर मेडल जित्न सफल भएका छन । जसले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको थियो । त्यस्तै गरी कोलकत्तामा भएको अर्को म्याचमा हाम्रो विद्यार्थी भाईबहिनीहरुले गोल्डेन, सिल्भर, ब्राउन मेडलहरु जित्नु भएको छ अनी त्यस्तै गरी यो शैक्षिक सत्र पनि विद्यार्थी भाईबहिनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि शारिरि र मानसिक क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरु विद्यालय भित्र सञ्चालन गर्यौ । त्यसको अलवा बाहिर पनि सहभागि हुन सक्नु भयो र राम्रो नतिजा पनि ल्याउन सफल हुन सक्नु भएको छ । त्यस मानेमा यो बर्ष सफताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कान्तिपुर एकेडेमी कस्तो स्कुल हो ?, कसरी सुरु गर्नु भयो ?
कान्तिपुरको इतिहासको कुरा गुर्न पर्दा यो विद्यालय २०५९ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो । यसले २०६५ साल देखि एसएलसीको परिक्षा दिदैँ आएको छ । यसमा चाहीँ म अलिकती पछाडी आएर जोडिएको हुँ । लगभग ५,६ बर्ष अगाडी देखि हामीले यो विद्यालयको व्यबस्थापनलाई लिएका हौँ । त्यस पछी यो संस्थाको बृद्धि र विकासका लागि दुवै क्षेत्र एकेडेमी,भौतिक क्षेत्रमा तथा सबै क्षेत्रमा सुधारको प्रयत्नमा हामी लागि रहेका छौँ । अब यो सुधारको प्रयत्न गर्दा खेरी हाम्रो अभिभाकहरु ज्युको समर्थन, हाम्रो शिक्षक साथी तथा कर्मचारीको लगलनशिलता, मेहनत, विद्यार्थी भाईबहिनाहरुको समर्थन यो सबै कुराले यो कान्तिपुर एकेडेमीलाई एउटा बालबालिकाहरुका लागि एउटा सुरक्षित शैक्षिक गन्तब्यको रुपमा यो विद्यालयलाई विकास गरेर आईरहेका छौँ ।
अबको शिक्षाका लागि कान्तिपुर एकेडेमी नै किन रोज्ने ?
वास्तबमा के छ भने २१ औँ शताब्दि एउटा विश्वव्यापीकरणको समय हो । यो युग भनेको ग्लोबलाईजेसनको युग हो । यहाँ थुपै विविधिकरणहरु छ समाजमा र हामीले कुनै पनि कुरालाई युनिफर्मिटि गरेर राख्न सक्दैनौ । समाजमा विभिन्न खालका विविधताहरु छन । आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, शैक्षिक दृष्टिकोणले त्यसो भएको कारणले यो राज्यलाई आजको राष्ट्रको विकासको समृद्धिको लागि हामीले सबै बर्गलाई समेट्न जरुरी छ । उनीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्न जरुरी छ । शिक्षाको कुरालाई हेर्दा हामीले आज हाम्रो केबल पेरिफेरीलाई हेरेर हैन आजका बालबालिकाहरुलाई विश्वको मागलाई धान्न सक्ने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिको रुपमा उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो र त्यसमानेमा कान्तिपुरले समग्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्यार्थी भाईबहिनीकहरुको शैक्षिक बृद्धि र विकासका लागि हामीले महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु चलाएका छाँै । हामीले शैक्षिक सत्रको सुरुवात देखि नै बार्षिक सिकाईका कामहरु गर्छौ । त्यो अनुसार हाम्रो एकेडेमीक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्छौ ।
त्यस्तै गरी प्रिपाइमरी तहमा हामीले मण्टेश्वरी बेसमा हाम्रो कार्यक्रमहरुलाई विगत देखि नै अगाडी बढाई रहेको छौँ र अभिभावक ज्युहरुको बडो समर्थन छ । हामीले यहाँ रहेका शिक्षक साथीहरुलाई तालिम दिन्छौँ । त्यसमा पनि हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल मेम हुनुहुन्छ उहाँ आफै पनि मण्टेश्वरी विधिको टे्रनर पनि हो । उहाँ यहाँ मात्र हैन विभिन्न स्कुलहरुमा पनि टे्रनिङ्ग दिनुहुन्छ ।
बाल कुमार गुरुङसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः